Brook kwa ụbọchị: Chọta Tweets Kasị Mma nke Mmasị | Martech Zone
Mgbe m na-eso ọtụtụ akụkọ na Twitter, anaghị m eme -eso ihe ndekọ. Twitter bụ iyi m ga-elegide anya ụbọchị niile ma ọ bụrụ na m chọrọ ijide ozi niile m chọrọ na ya. Ọ bụ ezie na m hụrụ Twitter n'anya ma bụrụ ihe enyemaka dị egwu, ịchọta ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere idozi ọdịnaya ahụ na-enye aka.
Brook na-enye gị ohere ịmepụta edemede wee soro akaụntụ Twitter n'ime edemede ndị ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ n'okpuru, emere m nyocha Analytics, debara aha ndị mmadụ m chọrọ iso, wee nye ha ụdị maka Analytics.
Dị ka onye na-adịghị elekwasị anya na Twitter ụbọchị niile, nke a ga-abụ mgbakwunye na-enweghị ọnụ na ngwa m na-eji iji dozie iyi Twitter m ma nweta ozi nke gbagoro n'elu!
Tags: iyitobe kwa ubochinhaziTwitter
Na-ere NA ọdịnaya adịghị ere na ọdịnaya